Uma ufuna kuqondile roulette game izici okwamanje namaqiniso elula ihluzo, European Roulette iyona engcono kakhulu ngawe. Kulokhu Mahhala Roulette Imigomo Ibhonasi, ungakwazi ukudlala izinombolo kusukela 1 ukuze 36 kanye zero olulodwa. Izinombolo ngokunganaki ekhonjiswe izindawo enye ezimnyama leli sondo roulette. I ihluzo yalesi game 3D inikeza okuhlangenwe nakho enengqondo nge close-up umbono waleli sondo. Ngakho ungakwazi ngokucacile ukubona ibhola kweqa futhi lapho ihlala. Kukhona inketho emjahweni ukubheja kule okufana kakhulu. Imikhawulo mnikazi lo mdlalo uqale nge okungenani £ 0.20 lungene £ 100 isikhundla ngayinye.
Mayelana nonjiniyela European Roulette
Lokhu efanele eklanyelwe Mahhala Roulette Imigomo Ibhonasi umdlalo sidalwe NetEnt. Omunye Onjiniyela esikhulu kunazo zonke emhlabeni angamakhulukhulu imidlalo emikhakheni ehlukahlukene yekhasino ezifana Slots, ithebula futhi bukhoma nomthengisi imidlalo.
Kulesi elula Mahhala Roulette Imigomo Ibhonasi game, ungafaka ngezimali zakho ku izinombolo ahlukahlukene kuhlanganise kubhejwa ngaphandle. Indawo lapho ungakwazi ukunqoba umvuzo eliphakeme iqondile olulodwa 35 izikhathi Imininingwane yakho ukubheja lemali. Kukhona ezahlukene kubhejwa ezine ngaphakathi ngaphezulu ukuthi ungakwazi ukunqoba kusukela. Ukuhlukaniswa siqukethe izinombolo ezimbili ezihlukene futhi uyakulalela 17 komunye uma amabhola umhlaba nganoma iyiphi yalezo ezimbili. Ngokufanayo, emgwaqweni ine izinombolo ezintathu ikholomu, namakhefu akhokhelwayo of 11 komunye. Corner siqukethe izinombolo ezine futhi uyakulalela 8 komunye. Ekugcineni, olayinini has izinombolo eziyisithupha okhokhela 5 komunye ku ukubheja yakho Imininingwane.
Isici best slot ukuthi ingadlalwa e Slots inthanethi akukho idiphozi zeselula okwengeziwe, izici ibhonasi kungenziwa kwabangela uma liyothi cababa ezintathu noma ngaphezulu iplanethi chitha izimpawu noma yikuphi itolitji. Uma uyobe baphumelela ekwenzeni lokhu, ke uzonikwa eziyishumi Posh osebenzisa free. Njalo uwine wenza ngalesi round ezophindaphindwa ngo 2x uma zasendle ehilelekile ke ngizakwandisa ngu 4x. Uma lucky ngokwanele futhi eminye bakwazi ukuyohlala osakaza ezintathu ngaphezulu, ke ngeke akuvumele kabusha kushiya osebenzisa.
Ukubheja Ngaphandle: Kunezinhlobo ezinhlanu ezahlukene kubhejwa ngaphandle ukuthi ungakwazi ukunqoba kusukela. I-red-black, ephezulu nephansi, oyinqaba ngisho, ikholomu kanye kweshumi kukhona izikhundla. I ukukhokhelwa nazi 1 ukuze 1 ngaphandle ikholomu kanye kweshumi nge 2 ukuze 1. Amathuba la ukubheja pretty ephakeme kunaleyo kubhejwa ngaphakathi futhi ngalesosizathu akugcina imodi ngokuwina.
game Ezenye: Lokhu Mahhala Roulette Imigomo Ibhonasi umdlalo ubonisa imiphumela zokugcina eziyishumi imidlalo esikrinini main. Kukhona ithebhu umlando ubonisa ukuthi imiphumela zokugcina 100 imidlalo. Lezi izibalo ukukusiza ukudlala ngamasu aphumelela kakhudlwana imidlalo zakho zesikhathi esizayo.
Ngomqondo wezimpimpi 3D futhi izici okuthakazelisayo eziyokusiza ukuba unqobe kalula, lokhu Mahhala Roulette Imigomo Ibhonasi umdlalo has ephansi endlini emaphethelweni 2.7%.